Z to Z or Dr. Maung Zarni’s open letter to Ko Zargana | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တိုင်းပြည်ကို ဖျက်စီးဖို့ ယန္တယားတခုအဖြစ် သူတို့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ ဝီရသူမှာဘဲ အပြစ်ရှိတာလား ဘယ်သူ တရားခံ အစစ်လဲ
Even after getting the massive criticism, stubborn U Wirathu is not repentant »
Z to Z or Dr. Maung Zarni’s open letter to Ko Zargana
A question for အကျဉ်းသားရေးရာကော်မတီဟောင်းတွင် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ကျဉ်းဟောင်းဦးဇာဂနာ
Dear Esteemed Saya U Zarganar Khin Bya,
If your new best friend Super-Minister and Thein Sein handler Soe Thein (US-trained ex-Admiral) does not think Rohingya Dr Tun Aung is ‘political prisoner’, does that make himacriminal or terrorist or something lesser who gets released because of ‘foreign interventions’ – as you stated clearly here?
What really was Dr Tun Aung’s crimes for which the regime locked him up, other than that he wasaprominent Rohingya leader who had some sway with his own people?
If ethnicity isapolitical and social construct – as it is – then hundreds of Rohingya locked up in Rakhine state jails and in semi-concentration camps – known as IDP camps – would you call for their release – in addition to SSA and other armed fighters and non-violence activists?
‘‘ဒီလူ (ဒေါက်တာထွန်း အောင်) ကို အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ကော်မတီထဲက ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းတို့ကအစ နိုင် ကျဉ်းလို့လက်မခံခဲ့ကြဘူး။ ခုကျ တော့ အရင်ကော်မတီလည်းမရှိ တော့ဘူး။ အသစ်ပြန်ဖွဲ့တဲ့ ကော် မတီကလည်း အသက်ဝင်တာ မတွေ့သေးတော့ ကြည့်ရတာ နိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂကပေး တဲ့ဖိအားကို သမ္မတက သူ့သဘောနဲ့သူ နည်းနည်းသက်သာရာရ အောင် လွှတ်တယ်လို့ပဲ မြင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီ ကုလ၊ ကန်လက်ထောက်ဝန်ကြီး ဘယ် သူလာလာ ဒီလူအကြောင်းကိုပဲ ပြောတယ်။ သူတစ်ယောက် တည်း ထောင်ထဲမှာရှိတာမဟုတ် ပါဘူး။ အခု သာယာဝတီထောင် ထဲမှာ ရှမ်းပြည် SSA ကတောင်း ထားတဲ့ သူတွေကို မလွှတ်ပေး သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြင်ကလာ တဲ့လူတိုင်း ဦးထွန်းအောင် အကြောင်းပဲမေးကြတယ်’’ဟု ယခင်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားရေးရာကော်မတီဟောင်းတွင် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ကျဉ်းဟောင်းဦးဇာဂနာကပြောသည်။
Finally, I would like to ask why did you call for the release of ex-‘military intelligence’ – state-authorized torturers, interrogators and executioners – while you have been unable to bring yourself to telling the truth about the persecution of the Rohingya, including hundred of Rohingya who are languishing in jails – asamatter of government policy.
This entry was posted on January 23, 2015 at 8:59 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.